Myint Than | လမ်းအိုလေး
Tag Archives: Myint Than
ရိုမာန်အင်ပါယာ ကျဆုံးသွားခြင်း၊ လူနီရိုင်းတို့ရဲ့ ၁၈၈၁ ခုနှစ်က ထောင်ထခြားနားမှု၊ ပိုလန်နိုင်ငံကို ဟစ်တလာက ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း နဲ့ လေပြင်းတို့ မွှေ့တဲ့အခါ … (မြင့်သန်း)
… and the Realm of Raging Winds
လေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်မတို့ မသိကြသေးတာတွေ အများချည်းပဲ၊ တခြားဟာတွေ လိုပဲပေါ့၊ ရှေးဟောင်းသမိုင်း၊ ကင်ဆာရောဂါ၊ သမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်၊ အာကာသ ဆိုတာတွေလိုပဲ၊ ဒါမှမဟုတ်သေးရင် ကာမဂုဏ် ခံစားကြတာလိုပေါ့
Aeroplane: or, how he talked to himself
as if reciting poetry
ပျံနေခဲ့တယ် ဆိုပေတဲ့ ငြိမ်နေတယ်၊
by lanolay	2 Comments
ဟိုးအဝေးကြီးက တရုတ်ပြည် (မြင့်သန်း)
သဘောင်္ဆိပ်ဖက်ဆီက ကျောက်တုံးတွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ လှေကားထစ်တွေပေါ်မှာ ထိုင်ရင်း တရုတ်ပြည်ဖက်ဆီကို ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားမယ့် လှေကြီးတွေကို မျှော်နေမိတယ်။ မျက်စေ့တစ်ဆုံး မြင်နေရတဲ့၊ ဘာမှမရှိတဲ့ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းဆီမှာ ပေါ်လာချိန် တန်နေပြီ။ တရုတ်ပြည်ကြီးအကြောင်းကို တွေးကြည့်နေမိတယ်။ လင်းလက်နေတဲ့ အမိုးတွေ အစိမ်းရောင်တောက်နေတဲ့ စိုက်ခင်းတွေ … ။
သူမ၌တွေ့ရှိရသော ငါ၏ ချစ်ခြင်း (မြင့်သန်း)
ထည်လဲမဟုတ်တတ်သော အပျိုမ၏ အပြုံးမျိုးကို ထွက်ပြူစလရောင်အောက်၌ တွေ့ရလိမ့်မည်လားဟု ကျွန်တော်က တွေးလိုက်မိသည့်တိုင် ထိုအပြုံး၏ နောက်နားဆီမှ ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်ပါလာသည့် မတွေ့ရတော့ဘူးဟူသော တင်ကူးသိရှိထားမှုတစ်ရပ်အား သိသိချည်းဖြင့် မသိချင်ယောင်ဆောင် နေလိုက်မိသည်မှာ စင်စစ် ကျွန်တော်၏ အရင်းခံကျကျ ရိုးသားမှုတစ်ရပ်သာ ဖြစ်မည်ထင်သော်လည်း လရောင်ကိုမူ လဆန်းတွင်ဖြစ်စေ၊ လဆုတ်တွင်ဖြစ်စေ တစ်ခါမျှ ရိုးသားသည်ဟု ကျွန်တော် မမြင်မိသေးသောကြောင့် အကယ်၌ လရောင်က ဒီရေမြင့်တက်စေသည် ဟူသော အဆိုမှာ တကယ်ပင်ခိုင်မာခဲ့သည်ဟု ဆိုကြလျှင် ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ထိုအဆိုမျိုးကို လက်ခံရင်း လမ၀င်သွားစေရန်လည်းကောင်း၊ လကွယ်နေ့ညများ ရှိမလာစေရန်လည်းကောင်း ကြိုးစားကြည့်ချင်စိတ် ရှိပင်ရှိခဲ့စေကာမူ မဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းတစ်ခုအတွက် အချိန်ကုန်ခံနေမည့်အစား ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းတစ်ခုခုကို ကြိုးစားချင်သည်ဟု တွေးကြည့်မိလိုက်ခြင်းမှာ အချိန်ကုန်သွားစေရန် ဖြုန်းတီးပစ်မည်ဆိုသော အားထုတ်မှုမျိုး မဟုတ်သည်ကဲ့သို့ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သော အချိန်ကာလများအတွင်း လရောင်ကြောင့်ဖြစ်စေ လရောင်မပါဘဲလျက်ဖြစ်စေ ပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ဟု ထင်ရသော တင်ကူးလက်ခံတွက်ဆထားသော သိမှုတစ်ခုအပေါ် ကျွန်တော် အဖြေတစ်စုံတစ်ရာ ကြားချင် သိချင်နေသောကြောင့်သာ ဖြစ်ပေမည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ခန့်က ယနေ့ညနေခင်းကဲ့သို့ တစ်ခုသောလပြည့်ကျော်၏ ညနေခင်းတစ်ခုတွင် ဤနေရာ ဤကန်ဘောင်ရိုး၌ထိုင်ရင်း အင်နာတဲလ်အားစကားတစ်ခွန်း မေးခဲ့ဖူးရာ ဘာသာစကားအခြေခံ ဆက်သွယ်မှုအရ တည်ဆောက်ထားသော ကျွန်တော်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀အတွင်းမှ လူမှုဆက်ဆံရေးပုံစံတွင် ကျွန်တော်မေးသောစကားတစ်ခွန်းအပေါ် သူမအနေဖြင့် ဟုတ်တယ်,မဟုတ်ဘူး၊ သဘောတူတယ်,မတူဘူးကိုသာ ဖြေရန်ရှိသဖြင့် ကျွန်တော်နှင့် သူမ၏အကြားတွင် အပြန်အလှန်ဖလှယ်ရန် စကားလုံးမြောက်မြားစွာ ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ထင်မိခဲ့သော်လည်း ထိုတစ်ညနေခင်းက ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသားမှာ စကားလုံးပေါင်းမြောက်မြားစွာကို ငြိမ်သက်သောညနေခင်း၏ လရောင်အောက်၌ သိမှုများနှင့် အစွမ်းပြိုင်ရင်း အဖြေမပေးနိုင်သော မေးခွန်းပေါင်းများစွာအတွက် ကာလတရားကို သုံးစွဲပစ်ခဲ့မိကြသည်။
တိရစ္ဆာန်ရုံကို ဖွင့်လိုက်ရခြင်း (မြင့်သန်း)
ကျုပ်အနေနဲ့ ပြောချင်တဲ့ အချက်ကတော့ လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာက အရာရာအတွက် အဖြေတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ လွတ်လပ်ခြင်းတိုင်းမှာ တာဝန်ယူမှုဆိုတာ လိုအပ်တယ်။ တာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့ လွတ်လပ်မှု မှန်သမျှဟာ ရမ်းကားမှုဖက်ဆီ ရောက်သွားတာပဲ …
Categories: Prose, Short Stories | Tags: မြင့်သန်း, ၀တ္ထုတို, lanolay, Myint Than, Short Stories | Permalink.
ဒါပေတဲ့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်၊ ကျွန်တော်က ပြီးပြည့်စုံမှုမရှိခြင်းကို ကြိုးကြိုးပမ်းပမ်းနဲ့ ရယူနေခဲ့တာ။ ဒီတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့​ ရွေးချယ်လိုက်မှုနဲ့ ကျေကျေနပ်နပ်
နေသွားဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်။ အဆုံးမှာတော့ ခင်ဗျားနဲ့ သားပိုက်ကောင်​​​​လေးကောင်က ကျွန်တော့်ကို ဒီပြီးပြည့်စုံမှု မရှိနိုင်ခြင်း အဖြစ်ထဲကို ရောက်သွားစေခဲ့တာ။
The Kangaroo Communique by Haruki Murakami
Categories: Prose, Short Stories | Tags: ဘာသာပြန်, ဟာရူကီ မူရာကာမီ, မြင့်သန်း, ၀တ္ထုတို, Haruki Murakami, lanolay, Myint Than, Short Stories | Permalink.
မုန့်ဆိုင်ကို ဒုတိယအကြိမ် ဝင်ရောက်လုယက်ခြင်း (မြင့်သန်း)
လှေဝမ်းထဲမှာ ခြေကိုဆန့်ထုတ်ပြီး လှဲနေလိုက်တယ်။ မျက်လုံးတွေကို ပိတ်ထားတယ်။ တက်လာတဲ့ ဒီရေက ကျွန်တော်ရောက်အပ်တဲ့ နေရာဆီ ကျွန်တော့်ကို သယ်သွားမှာကိုပဲ စောင့်နေမိတော့တယ်။
ကျီ မီး နဲ့ ရှို့ (မြင့်သန်း)
ငှက်ရုပ်ကလေး ရေးနေတယ် (ဇေယျာလင်း)